दालचीनीको प्रयोगबाट डा’यबिटीजलाई नि’यन्त्रण गर्ने सरल घरेलु उपाय…पूरा पढी जानकारीको लागि सेयर गर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
दालचीनीको प्रयोगबाट डा’यबिटीजलाई नि’यन्त्रण गर्ने सरल घरेलु उपाय…पूरा पढी जानकारीको लागि सेयर गर्नुहोस् ।
October 15, 2020 104
एजेन्सी : मधुमेह वा डा’यबिटीज खत’रनाक रो’ग हो । यस रोगको उपचारको लागि दालचीनी निकै नै फाईदाजनक छ । दा’लचीनीको नियमित सेवनले म’धुमेहबाट बच्न सकिन्छ । दालचीनीले रगतमा ग्लु’कोजको मात्रालाई निय’न्त्रण गर्छ ।
१) सबैभन्दा पहिला एक कप पानीमा दालचीनीको धुलोलाई हाल्नुहोस् । त्यसपछि यस पानीलाई उमालेर पिउनुहोस् । दालचीनीको धुलोलाई तपाईंले दुधमा हालेर पनि पिउन सक्नुहुन्छ । यस पानीलाई हरेक बिहान सेवन गर्नाले मधु’मेहबाट छुट’कारा पाउन सकिन्छ ।
२) दालचीनीलाई पिसेर थोरै चियामा हालेर पनि पिउन सक्नुहुन्छ । यस चियालाई दिनमा दुईपटक पिउनाले पनि म’धुमेह निय’न्त्रण हुन्छ ।
३) दिनहुँ तीन ग्राम दालचीनीको प्रयोग गर्नाले रगतमा ग्लु’कोजको मात्रा कम हुन्छ ।
दालचीनीको अधिक मात्राको सेवनले स्वास्थ्यमा हा\_नी पुग्न सक्छ । त्यसैले थोरै मात्रामा दिनहुँ सेवन गर्नुहोस् ।
सुनेको भरमा अनुहारमा भुलेर पनि नलगाउनुहोस् यी चिज, जसले बि’गार्दछ तपाईको अनुहार !
ए’क अर्काले भनेको सुनेर मा’निसले अनुहार राम्रो बनाउँन अनेक कुरा लगाउँने गर्दछ’न् । सुन्दर बन्ने चाहना हरेक व्यक्तिको हुन्छ । त्यसैले अनेक गर्छन् । जसले पनि अ’नुहारलाई सुन्द’र बनाउन सके सम्म हर कुराको प्रयोग गर्ने गर्छन् । मानव श’रिरको सबैभन्दा संवेदनशिन क्षेत्र भनेको नै अनुहार हो यहि अनुहार नै कु’रुप भयो भने विभिन्न समस्याहरु आउन सक्छन् । चाया पोतो ड’न्डीफोर जस्ता समस्याले सुन्दर अनुहारलाई कुरुप बनाएर सुन्दरता नै लुटिदिन्छ त्यसैले अरुको लहैलहैमा लागेर अनुहारमा जे पायो त्यहि प्रयो गर्नु हुँदैन् । आज हामी तपाईहरुलाई अनुहार सुन्दर बनाउनको लागि भनेर प्रयोग गर्न नहुने ५ चीजको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । जसको प्रयोगले अनहारलाई कुरुप बनाउनेछ ।
१, भनेगर : भे’नेगरमा केही मात्रामा एसिड प्रयो’ग गरिएको हुनाले प्रत्यक्ष अनुहारमा भे’नेगरको प्रयोग गर्नु हुँदैन् । जसले अनुहारको छालामा असर पार्ने भएकाले भे’नेगरमा अन्य चिज मिसाएर मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने छ । सकेसम्म यसको प्रयोग नगर्दा नै उचित हुनेछ । २,बियर : बि’यर पनि अनुहारमा लगाउनको लागि उचित छैन् । एसिड मिसेर निर्माण गरिने भएको कारण दैनिक रुपमा अनुहारमा बि’यर प्रयोग गर्दा डन्डिफोर आउने र अनहार भारी हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
३, खाने सोडा : धेरैको बुझाइ छ अनुहार सफ गर्नको लागि सोडा प्रयोग गर्नु पर्छ । तर यो बुझाइ एकदमै गलत हो । धेरै समय खाने सोडालाई अनुहारमा लगाउनाले अनुहारमा धब्बा र दागहरु आउने हुन्छ । ४, पुदीना : पु’दिनाले अनुहारलाई सफा गर्न त मद्दत गर्छ तर धेरै समय पुदिनाको प्रयोग गर्नाले विभिन्न समस्याहरु देखा पर्न सक्छ । कतिपयलाई पुदिनाको प्रयोगले डण्डीफोर आउने गर्छ । ५, मन्जन : एको इन्टरनेट तिर देखन सकिन्छ । जसको प्रयोगले अनुहारमा चमक त आउँछ तर अनुहार बिग्रन भने धेरै समय लाग्दैन् । जसले गर्दा चाया पोतो डन्डीफोर जस्ता समस्याहरु आउन सक्छन् ।
खा’ना खाने बि’त्तिकै नुहाउ’नु स्वा’स्थ्यका लागी ब’हुतै हा’निकारक, यस्तो छ कार’ण ! खा’ना खाने बित्ति’कै नुहाउन नहाउ’नु हुँदैन भनेर तपाईंले धेरैजनाले भनेको सुन्नुभएको हो तर यसलाई वञ्चित गरिनुको कारणबारे भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । श’रिरको तापक्रम घट्छः खाना खानेबित्तिकै नुहाउँदा तपाईंको शरिरको तापक्रम घट्ने गर्छ त्यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि शरिरका अन्य अंग जस्तै हात, खु’ट्टा, अ’नुहार आदिको रक्तप्रवाह बढ्ने गर्छ । यसो हुँदा शरिरको क्रियाकलाप सही ढङ्गले भइरहेको हुँदैन । यस्तो किन हुन्छ ? शरिरमा जब हामी पानी हाल्छौं तब र’गतको प्रवाह छालासम्म पुग्छ र श’रिरमा गर्मी पैदा हुन्छ । यदि हामीले खाना खानेबित्तिकै नुहायौं भने खाना पचाउन मद्दत गर्ने पेट वरिपरिको र’क्तसंचार प्रभावित हुन्छ जुन शरिरका अन्य भागमा नै तेज हुने गर्छ । यसो हुँदा खाना सही तरिकाले पच्दैन वा पच्न समय लाग्छ ।
खाना पचाउनका लागि शरिरलाई उच्च र’क्त प्रवाहको आवश्यकता पर्छ । यदि खाना खाएपछि तातो पानीले नुहाउनु हुन्छ भने शरिरलाई चिसो बनाउने क्रममा र’क्तनली फैलिएर रगतको तातोलाई छालासम्म पुर्याउने काम गर्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो दिमागले चाहिने जति रगत पाउँदैन । यसको प्रतिक्रियामा हामीलाई रिं’गटा लाग्नेजस्ता समस्या देखिन थाल्छ । यद्यपी, यो समस्या सबैमा देखिँदैन । यदि तपाईं बिरामी भइरहनुहुन्छ वा र’क्तसंचारसम्बन्धि कुनै समस्याको सामना गरिरहनु भएको छ भने खाना खानेबित्तिकै नुहाउँदा रिंगटा लाग्न सक्छ । त्यसकारण खाना खाएको एक वा आधा घण्टासम्म ननुहाउनुहोस् । त्यसैले खाना खानेबित्तिकै भारी काम वा कुनै व्यायाम नगर्न पनि सल्लाह दिइन्छ । यद्यपी, यी सबै तथ्य चिकित्सकीय हिसाबले पूर्ण रुपमा प्रमाणित छैन ।
फ्रि’जमा रा’खेको पा’नी सिधै पिउ’ने गर्नुहुन्छ भने यस्तो ख’तरनाक समस्याको शिका’र बन्नुहुदै’छ ! गर्मीको समयमा मानिसहरू प्राय फ्रिजको चिसो पानी पिउन मन पराउँछन् । तर, फ्रिजको पानी सीधै पिउँदा शरीरलाई हा’नि पुर्‍याउन सक्छ । विज्ञहरूको भनाइअनुसार धेरै चिसो पानीले मु’टुलाई पनि असर गर्दछ र मु’टुको धड्कन पनि कम गराउन सक्छ । फ्रिजको पानी सीधै पिउँदा यस्तो हुनसक्छ ।
वजन बढाउँछ: खाना खानेबित्तिकै चिसो पानी पिउँदा पाचन प्रक्रिया ढिलो हुन जान्छ । यसको खराब असर मेटाबोलिजममा पर्छ । जसको कारण शरीरमा बोसो जम्मा हुन थाल्छ र मानिस मोटाउन थाल्छ । घाँटीको संक्रमण: धेरै चिसो पानी पिउँदा सबैभन्दा बढी असर घाँटीलाई गर्छ । यसरी धेरै चिसो पानी पिउनेलाई प्राय: ट’न्सिलको समस्या देखिने गरेको छ ।
शरीरको तापक्रममा असर गर्छ: शरीरको तापक्रम ३७ डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ । यसलाई नियमित बनाउन शरीरलाई केही शक्ति आवश्यक पर्छ । तर, धेरै चिसो पानी पिउँदा खाएको खानाबाट पोषण तत्त्व तयार हुन सक्दैन । जसले गर्दा सन्तुलित तापक्रम हुनलाई समस्या पर्छ । मु’टुको गति कम पार्छ: जमेको पानी या धेरै चिसो पानी पिउँदा मु’टुको गति कम हुनसक्छ । एक अध्ययनका अनुसार भेगिनाको तागतलाई उत्तेजित गरिदिन्छ । भेगिनाको तागतले शरीरलाई सन्तुलित गर्न मध्यस्थता गर्छ । पानीले यसलाई उत्तेजित बनाइदिँदा मानिसको मु’टुको चाल कम बनाउन सक्छ । पा’चन प्रक्रियामा असर: बढी चिसो पानीले पाचन प्रक्रियालाई अ’सर गर्दछ । किनकि, यसले र’क्तसञ्चारमा असर गर्छ, जसले पाचन प्रक्रिया ढिलो गराउँछ र ठीक तरिकाले नपच्दा आवश्यक पोषक तत्त्व पनि मिल्दैन ।
यस्ता छन् धेरै चिसो पानी पि’उनुका हानी: १) फ्रिजमा राखेको चिसो पानी पिउनाले मु’टुमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसले स्नायुतन्तुलाई उत्तेजित गराइदिन्छ र मुटुको गति कम हुने गर्छ । यसबाट मु’टुको भल्भ खराब हुने समस्या समेत देखिन सक्छ । २) धेरै चिसो पानीका कारण र’क्तनलीहरु खुम्चिन्छन् जसले शरीरको पाचन प्रक्रियामा असर पार्छ । खाना राम्रोसँग नपच्दा आवश्यक मात्रामा शरीरलाई पोषक तत्व प्राप्त हुन सक्दैन । ३) धेरै चिसो पानी पिउँदा शरीरमा अनावश्यक रुपमा उर्जा खर्च हुन्छ । ४) धेरै चिसो पानी पिउनाले घाँटीमा असर गर्छ । यसले घाँटीका मांशपेशी तथा कोशिकाहरुमा असर पर्नुका साथै संक्रमणको खतरा हुन्छ ।
अन्य बेफाईदा- गर्मी मौसममा चिसो पानी कसलाई पो पिउन मन नलाग्ला र ? अझ फ्रिजमा राखेको चिसो चिसो पानी पिउनुको त मज्जा नै छुट्टै हुन्छ । त्यसैले त धेरै जसो मानिस गर्मीमा फ्रिजकै पानी पिउन रुचाउँछन् । तर के तपाईलाई थाहा छ फ्रिजको पानी सेवन गर्नु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कत्तिको हानिकारक छ ?
१. कृतिम तरीकाले चिसो बनाइएको फ्रिजको पानी सामान्य तापक्रम भन्दा निकै चिसो हुन्छ, जुन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । २. फ्रिजमा चिस्याइएको पानी पिउनाले पे’टको ठूलो आन्द्रामा नोक्सान पुग्दा ठूलो आ’न्द्रा सुक्न थाल्छ जसले गर्दा आ’द्राले सही तरीकाले काम गर्न सक्दैन । परिणामस्वरुप, विहानको समयमा पेट खल्लास नभई पेटको समस्या उत्पन्न हुन्छ । ३. धेरै चिसो पानीको सेवनले लामो समयसम्म क’ब्जियतको समस्या हुनेगर्छ ।
४. धेरै चिसो पानीको सेवनले हाम्रो शरीरको कोषिकाहरु सुक्न थाल्छ र जसले गर्दा उक्त कोषिकाहरुले सही तरीकाले काम गर्न सक्दैन । यसको असर तपाईको मेटाबोलिज्म तथा स्वास्थ्यमा समेत सिधै असर पर्ने गर्छ । ५. फ्रिजको पानी पिउनाले घाटी खराब हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । यदि तपाईले दिनहुँ फ्रिजको चिसो पानी सेवन गर्नुहुन्छ भने होशियार हुनुहोस् । यसका कारण घाँटी, ट’न्सिल, फो’क्सो तथा पाचन प्रणालीमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
शरीरमा पानीको कमी भएको कसरी थाहा पाउने ? पानी सबैलाई चाहिने एक तत्व हो । कतिपयले पानीलाई साधारण सोचिरहेका हुन्छन्। हामीले पानी जतिबेला चाहियो, जसरी चाहियो, जति मात्रामा चाहियो पिउन सक्छौँ भन्ने धारणा बनाएका हुन्छौँ तर यो गलत हो । पानीले हाम्रो शरीरमा रहेका सबै अङ्गलाई ठीक गर्नेदेखि लिएर शरीरमा बन्ने विषालु तत्वहरुलाई बाहिर निकाल्नका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । पेटदेखि छालासम्म होस् वा तौल बढाउनेदेखि तौल घटाउनेसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ पानीले। त्यसैले पानीको सही मात्रा, यसलाई पिउने सही समय र पानीलाई कुन तरिकाले पिउँदा कस्तो कस्ता फाइदा र बेफाइदा हुन्छन् भन्ने बारे जान्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ।
सही तरीकाले पानी नपिउने कुनै पनि मानिसले चाहे जतिसुकै स्वस्थकर खाना खाए पनि त्यसको फाइदा शरीरलाई हुँदैन। जसका कारण भविष्यमा मानिसले स्वा’स्थ्य सम्बन्धी अपच, क’ब्जियत, ग्या’ष्ट्रिक, कलेजो सम्बन्धी समस्या, आलश्य, कि’ड्नीको पत्थरी, प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी, समय–समयमा बिरामी हुनु, दाद, छालाको एलर्जी, मुखमा दाग धब्बा, शरीर बारबार चिलाउनु, टाउको दुख्नु जस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको हुन्छ । हाम्रो शरीरमा ७२ प्रतिशत पानी हुने गर्छ। त्यसकारण हामीले पिउने पानीले हाम्रो शरीरमा रहेका किड्नी, कलेजो, फोक्सो, पाचन प्रकृया र शरीरका सबै अंगको सही तरीकाले काम गर्ने अर्थात हाम्रो शरीरमा रशेका कोषीको जीवित राख्न मदत गर्दछ ।
एक दिनमा कति पानी ? हरेक दिन नियमित पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदा जनक मानिन्छ । पानीले शरीरका सबै अङ्गलाई राम्रोसँग काम गर्न मदत गर्दछ । मानिस खाना बिना केही दिनसम्म बाँच्न सकेता पनि पानी बिना सक्दैन । किनकी मानिसले गर्ने गतिविधीद्वारा हरेक दिन २ लिटर पानी जाने गर्दछ। त्यसैले मानिसले एक दिनमा कति पानी पिउने भन्ने बारे जान्न अत्यन्तै जरुरी छ । तर मानिसले कति पानी पिउने भन्ने बारे मानिस बसिरहेको ठाउँ वा प्रकृति हेरेर निर्धारण गर्नुपर्छ । सामान्य सबै मानिसले एक दिनमा कम्तिमा पनि तीन लिटर पानी पिउनु पर्दछ। तर गर्मी मौसम धेरै पसिना निस्किने, व्यायामहरु धेरै गर्ने मानिसले भने पानीको मात्रा सामान्य मानिसहरुको भन्दा बढाउन जरुरी हुन्छ। किनकी यस्ता व्यक्तिको शरिरमा पानीको खपत धेरै हुने गर्दछ।
शरीरमा पानीको कमी भएको कसरी पत्ता लगाउने ? यदि तपाइको शरीरमा पानीको मात्रा कम भएको छ भने धेरै जसोको पिसाबको रंग पहेलो हुने गर्दछ। त्यसका साथै पाचन शक्ति कमजोर हुने गर्दछ भने छालामा सुख्खापना देखा पर्दछ। यस्तो कुरा थाहा पाएर पानी समयमै नपिउने हो भने पछि यो गम्भीर रो’गको कारण पनि बन्न सक्दछ । एक पटकमा कति गिलास पानी पिउने ? धेरै मानिसहरुलाई यो लाग्न सक्छ, पानी जति बेला जसरी चाह्यो त्यति बेला पिउन सकिन्छ । तर त्यस्तो सोच्नु गलत हो। पानी पिउदा जहिले पनि बसेर बिस्तारै बिस्तारै पिउनु पर्दछ। पानीलाई मुखमा राखेर ३ देखि ४ सेकेण्ड यता उता घुमाएर पिउनु पर्दछ। उभिएर छिटो छिटो पानी पिउनाले कि’ड्नीले पानी सही तरीकाले फिल्टर गर्न सक्दैन। एक पटकमा दुई गिलाससम्म पानी पिउनु उपयुक्त मानिन्छ।
पानी कति बेला नपिउने ? खाना खाने समयमा कहिल्यै पनि पानी पिउनु हुदैन । यसरी पानी पिउँदा हामीले खाएको खानालाई चाहिने भन्दा धेरै पातलो बनाईदिन्छ। जसका कारण पाचन रस कम मात्रामा निस्किने गर्दछ। त्यसैले पानी सधैँ खाना खाएको ४५ मिनेट देखि १ घण्टा पछाडि मात्र पिउनु पर्दछ। बिहानको खाली पेटमा १ गिलास पानी पिउनुपर्दछ । पिउने पानी कस्तो हुनु पर्छ ? धेरै चिसो पानी कहिल्यै पिउनु हुँदैन। जसले पाचन प्रकृयामा समस्या निम्त्याउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि सामान्य वा मनतातो पानी पिउनु पर्दछ।
नोट: उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी विभिन्न पत्र -पत्रिकाहरु तथा अनलाइनबाट लिईएको हो । यसको सहि प्रयोगको लागि चिकित्सक वा सम्बन्धित बिषय विशेषज्ञसंग परामर्श लिन आवश्यक छ। यी बिषयवस्तुहरु जानकारीको लागी
प्रस्तुत गरिएको हुँदा कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि टिप्सहरु प्रयोग गर्नु भन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा चिकित्सक वा विशेषज्ञको सल्लाह लिनुहोला । स्मरण रहोस् यी सम्पूर्ण टिप्सहरु प्राचिन र आयोर्वेदिक प्रणालीमा पूर्ण रुपले आधारित हुन् तर, यसको उचित र सहि प्रयोगको लागि सम्बन्धित चिकित्सक वा सम्बन्धित बिषय विशेषज्ञसंग परामर्श लिनु नै राम्रो हुन्छ ।
Prevसंसारको सबै तरकारी मध्ये सबै भन्दा धेरै शरीरलाई अचम्मकै फाइदाजनक तरकारी स्कुस, के के कुरामा फाइदा गर्छ…हेर्नुहोस् ।
Nextछोराको आन्द्रामा प्वाल परे पछि मेरो छोरालाइ बचाइदिनु भन्दै बुवाले अस्पताल बाटै मागे गुहार सक्दो सेयर गरिदिनु होला ।
कर्णालीमा हिमपात, किसानलाई राहत
भिम उपाध्याय भन्नुहुन्छ : सत्कर्म नबुझेकालाई कुलमानको फोटो घर घरमा टाँसी सवक सिकाऔं…हेर्नुहोस् ।